ဘယ်တော့မှ မပြတ်တောက်သွားတော့ဘူးထင်ထားတဲ့ RSတွေဘာကြောင့်ပြတ်တောက်သွားကြလဲ?
အချစ်ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောရင် ကျွန်တော့်ကို အေးစက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လူလို့ပြောကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ကော့တေးတစ်ခွက်လိုပါပဲ။ ရီ၀ေမူးယစ်စေဖို့အများကြီးပေါင်းစပ်ထားရတာပါ။
RSတစ်ခုမှာ အချစ်ထက် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ချစ်ဖူးခဲ့လား? ချစ်ရက်နဲ့ ဘာကြောင့်ကွဲသွားခဲ့တာလဲ? သင့်မှာအဖြေရှိလား? ဒါပါပဲ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘ၀ကိုတည်ဆောက်လို့မှမရတာ။
သင်ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် သင့်ဘ၀အတွက်ရွေးချယ်မှု လုပ်လို့မရတဲ့သူတွေကိုတွေ့ဖူးခဲ့တယ်မလား? ဒီတော့ အချစ်ကို ဘာတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားလဲ RSတစ်ခုမှာ အချစ်ထက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေဘာတွေလဲဆိုတာမျှ၀ေရင်း ခိုင်မြဲတည်တံတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ရရှိအောင် တည်ဆောက်သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုချစ်သလို ကျွန်တေ့ာ်ချစ်သူကလည်း ကျွန်တေ့ာ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ မမှားနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချစ်တယ်ဆိုတိုင်း ယုံကြည်မှုရှိကြဖို့ဆိုတာတော့ခက်ပါတယ်။ ယုံကည်မှုဟာ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေအောင် လုပ်ပေးတဲ့အရာပါ။
ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ စိတ်သောကရောက်ပြီးနာကျင်ခံစားရတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေလိမ့်မယ်။ အူတိုမှု စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကို အချိန်ဖြုန်းရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေဖြစ်တတ်တဲ့ သံသယလေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် အမြဲလိုလို သံသယပွား ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုရင်တော့ တစ်နေ့နေ့မှာ အဲ့ဒီRSက အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ် သင်ဘယ်လောက် သူ့ကိုချစ်ကြိုက်နေပါစေပေါ့။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုမလေးမစားဆက်ဆံဖူးလား?ဆိုလိုတာက မင်းရဲ့အားနည်းချက်ကို အပိုင်ကိုင်ပြီး အနိုင်ယူစကားစစ်ထိုးတာမျိုး၊ မင်းကြိုက်တာတွေကို ပြက်ရယ်ပြုတာမျိုး၊ မင်းကိုထိခိုက်အောင် တစ်မျိုးပီးတစ်မျိုး စကားနဲ့နာကျင်စေတာမျိုး၊ မင်းအပေါင်းအသင်းတွေရှေ့ မျက်နှာပျက်အောင်လုပ်တာမျိုးစတာတွေပေါ့။
အချစ်က ဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတယ်လို့ခံယူထားသူတွေကတော့ ဒီအပြုအမူတွေကို သည်းခံချင်ခံနိုင်မှာပေါ့.. ဒါပေမယ့် လေးစားမှုမရှိတဲ့ အချစ်က ဆားမပါတဲ့ ဟင်းလိုပဲ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ အရသာမရှိပါဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲချစ်တယ်ပဲပြောပြော မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေ စကားတွေကြောင့် RS တစ်ခုဟာ တချိန်ချိန်မှာ အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်.ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းဘဝအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့မင်းအတွက်မကောင်းတဲ့RSတစ်ခုနဲ့ရှေ့ဆက် သွားမယ်ဆိုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ခံနိင်ရည်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့။
သင်ရဲ့ RSတစ်ခုက လုံခြုံမှု(Safety)ရှိရဲ့လား? သင့်ချစ်သူက သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး အနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိနေလား? သင့်ကို အမြဲစိတ်ဆင်းရဲရအောင်လုပ်နေသလား? ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိနေလား? အဖြေက “NO” လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်ပါစေ၊ အဲ့ဒီအကြောင်းတရားက သူ့ဘေးက သင့်ကိုထွက်ခွာသွားစေဖို့ တွန် းအားဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကို အလွှဲသုံးစားမှုပြုတာဟာ အချစ်ကိုစော်ကားတာနဲ့လည်းအတူတူပဲမလား? သင့်ရဲ့ကြီးမြတ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့အချစ်က သင့်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင် ဒါမှမဟုတ် မသေအောင် အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ သင်တွေ့ဖူးလား?။
ယောကျာ်းက ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ လည်စည်းခံတဲ့မိန်းကလေးတွေလေ၊ သူတို့ဟာ RSတစ်ခုမှာ အချစ်ကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်းစားဘ၀မှာတည်းက ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်သူဆို ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။
တလောက တောင်ဒဂုံမှာ ဇနီးဟောင်းကို ဓါတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့လိုက်တာမျိုးဆိုကြည့်ပါ၊ အဲ့ဒီကောင်မလေးက အရင်တည်းက ခနခန နှိပ်စက်ခံရလို့ ကွာရှင်းခဲ့ပြီးသားပါ၊ နောက်ဆုံးတော့ သူယုံကြည်ခဲ့တဲ့အချစ်က သူ့သက်ကို မကယ်နိုင်ခဲ့ဘူးမလာဂ? ဒါကြောင့် လုံခြုံမှု(Safety) မရှိတဲ့အချစ်ကို တချို့တွေက ပြတ်ပြတ်သားသားစွန့်ခွာသွားတာ သူတို့ကိုလည်း အပြစ်မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ချစ်ဦးစနေ့ရက်တွေလို ပျော်ရွှင်စရမကောင်းကြတော့ဘူးလား? ဘာကြောင့် အချစ်က အဲ့ဒီလိုငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသွားတာလဲ? ဒါဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွက် လက်တွဲဖော်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းက ပျော်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။
သုခနဲ့ဒုက္ခတွေကို နှစ်ယောက်အတူတူ ရယ်မောနေကြတာမျိုးပေါ့။ ဘယ်လောက်ချစ်နေပါစေ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ RS တစ်ခုကိုဆက်သွားနေရရင်တစ်ခုခုတော့မှားနေပီဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့်တချို့ RSတွေပြတ်တောက်သွားကြတာပေါ့။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးတိုင်းဟာ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သင့်ဆက်ဆံရေးဟာ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနေပြီဆို အချစ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ပြန်မွေးမြူဖို့သင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နော်။
မင်းကြိုက်တာလေးတွေကို သူမကြိုက်လည်းနားထောင်ပေးတဲ့ချစ်သူရှိခဲ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့မနှစ်သက်သည့်တိုင် မင်းနဲ့မင်းမဲ့ပက်သက်တဲ့ အရာတွေကို လက်ခံပေးတဲ့သူက မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့အချစ်နဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
မင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို မကြိုက်ဘူး ဆိုရင်တောင် မင်းမျက်နှာလေးတစ်ခုတည်းအတွက် လိုက်လျောညီထွေ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့သူမျိုးပေါ့။ တချို့တွေက အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကြပါဘူး။
မင်းကိုဘာမှအခွင့်ပေးမှာမဟုတ်သလို မင်းနဲ့ပက်သက်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်လျောညီထွေမဆက်ဆံပဲ အတ္တဗဟိုပြုဆက်ဆံရေးကိုလုပ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ မင်းတို့ဆက်ဆံရေးက တစ်နေ့ အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မင်းက အချစ်ကို ကိုးကွယ်ပြီး ဇွတ်ရှေ့ဆက်တိုးနေရင်တောင် တချိန်ချိန်မှာ မင်းသူ့ကို စွန့်ခွာဖို့ လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘယ်တော့မှ မပြတ်တောက်တော့ဘူးထင်ရတဲ့ RSတွေ ပြတ်တောက်သွားကြတာပေါ့။
အချစ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဆိုကြပါတယ်။ဒါက စစချင်းအချစ်တွေမှာဆို ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကျတော့လည်း လှလို့ အရပ်ကောင်းလို့ မျက်လုံးဝိုင်းလို့ စတဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့လည်းချစ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်အရေးကြီးတာက မင်းဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံပြီး မင်းကမင်းဖြစ်လို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
မင်းနဲ့RSတည်ဆောက်ထားသူတစ်ယောက်က သူနဲ့ချစ်ပြီးနောက် မင်းဖြစ်တည်မှုတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ဒါမှမဟုတ် ထိန်း ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာရင် မင်းတို့ကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက မင်းသီချင်းဆိုတာကို သူမနှစ်သက်ဘူး၊ မင်းစကတ်အတိုဝတ်တာကို မကြိုက်ဘူး၊ ကဗျာရေးတာကို မကြိုက်ဘူး မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဆုံးရှုံးခိုင်းလိုက်တာမျိုးစသဖြင့် ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင် မင်းတို့ဆက်ဆံရေးက ပျက် သုဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ သင်တို့သဘောတူညီမှုယူလို့ရပါတယ်..ဒီလိုမှမရရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲချစ်ကြပါစေ တချိန်ချိန်မှာ အရင်းနှီးဆုံးသူစိမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..သင်ကလည်း သင့်ဖြစ်တည်မှုကိုသင့်ဖြစ်တည်မှုလေးအတိုင်းလက်ခံပေးတဲ့လူနဲ့ ဆက်လက်တွဲနေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အိုကေ ဒီတစ်ခုက အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ လိင်ကိစ္စ မပါပဲနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ လိင်ရော Love ရောဆိုရင်ရောပိုမကောင်းဘူးလား? တစ်ကယ်တော့ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် RS တစ်ခုမှာ လိင်ကိစ္စ က တော်တော် အရေးကြီးပါတယ်။
သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေ ပဲမလား? သင်တို့ဆက်ဆံရေးမှာ လိင်ကိစ္စ ခံစားမှုပိုင်းနဲ့ ပက်သက်လို့ မပျော်ရွှင်တဲ့ မကျေနပ်ရတဲ့ အချိန်တွေများလာမယ်၊ သူနဲ့အကောင်းဆုံးအတူတူနေဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းတာတွေပဲဆက်ရနေမယ်ဆို သင့်ချစ်သူကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးတေ့ာပါဘူး၊ သင့်ရဲ့ မသိစိတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆန်းသစ်တဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့တစ်ခုခုကို လိုချင်တောင့်တနေပါလိမ့်မယ်။
ဒါက ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး၊ လူ့သဘာဝပဲမဟုတ်လား? တကယ်လို့ သင်က ငြီးငွေ့မှုတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အချစ်နဲ့တိုင်း တာနေပြီး ဆက်သွားနေရင်တောင် တချိန်ချိန်မှာ ပြဿနာတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စက အချိန်အကြာကြီးတွဲကြတဲ့ စုံ တွဲတွေမှာဆို ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်သောက ရောက်ခံပြီး သွားနေရတဲ့ RS တစ်ခုဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ ပြတ်တောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။
ဒီတစ်ခုကလည်း RS တစ်ခုမှာ တစ်ကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ဘာသာသင် ဘယ်လာက်ချစ်ချစ် အချစ်ကို မဖော်ပြတတ်ရင် အချစ်ခံရတဲ့သူက သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ကိုဖော်ပြတတ်ရပါတယ်။ သင့်အချစ်ကို အပြုအမူတွေနဲ့ပြနိုင်သ လို စကားတွေနဲ့လည်းပြနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက သူ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုမေး တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုး၊ ကောင်းမွန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ ဘယ်လိုသွားချင်လဲ မေး၊ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲတိုင်ပင် စသဖြင့်ပေါ့။ တကယ်လို့ သင်နဲ့သူဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး မရှိကြဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ချစ်နေရင်ပြီးတာပဲဆိုရင် နောက်တစ်ယောက်ဆီပါသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပါပဲ စုံတွဲတွေအများကြီးပြတ်တောက်သွားကြတယ်။
နှလုံးသားရေးရာက အတော်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ သင်တို့ဟာ တစ်စုံတစ်ဦးကို ချစ်နိုင်ပေမယ့် အတူနေချင်တဲ့စိတ် မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ဆိုလိုတာက သင့်မှာ တခြားပန်းတိုင်တွေရှိသေးတယ်၊ အိမ်နဲ့အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ စသဖြင့်ပေါ့၊ သင်ကတိက ဝတ်ပြုဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာမျိုးပေါ့။ အချိန်ကာလက အရေးကြီးပါတယ်။
တချို့တွေကတော့စောင့်နိုင်ကြပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ သူတို့ကို လိင်ကိစ္စအတွက် “လိုသုံး “လို အသုံးချနေတာဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ပြဿနာတွေဖြစ်လာကြတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အချိန်အကြာကြီးတွဲတဲ့သူတွေက မယူဖြစ်ပဲ ပြတ်တောက်သွားကြတာပါ။
တစ်ကယ်တော့ လူနှစ်ယောက် အတူနေဖို့ဆိုတာ အတူနေချင်တဲ့စိတ်က အရေးကြီးဆုံးပါ။ ကဲဒီလောက်ဆို အရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စုံတွဲတွေ အချိန်တွေအများကြီးတွဲပြီးကွဲသွားတဲ့စုံတွဲတွေဘာကြောင့် ကွဲသွားကြလဲဆိုတာသိပြီး အချစ်ထက် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြပါစေ.သက်ဆုံးတိုင်ပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်နဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိင်ကြပါစေ မိတ်ဆွေတို့။